Didier Deschamps Oo Ka Warbixiyay Dhaawaca Xalay Soo Gaaray N'Golo Kante Xilli Lampard Uu Diidanaa Inuu Xiddigaan France U Dheelo | Laacib.net
Didier Deschamps Oo Ka Warbixiyay Dhaawaca Xalay Soo Gaaray N’Golo Kante Xilli Lampard Uu Diidanaa Inuu Xiddigaan France U Dheelo
October 12, 2019 Balaleti 0
Tababaraha xulka Faransiiska Didier Deschamps ayaa sheegay inuusan halis aheyn dhaawaca soo gaaray N’Golo Kante ka dib markii xiddiga khadka dhexe uu dhaawac soo gaaray ka hor kulankii ay xalay ka badiyeen Iceland.
Xiddiga Chelsea ayaa dhaawacyo la dhibtoonayay xilli ciyaareedkan waxaa uu qeyb ka ahaa shaxda xulka France ee la ciyaareysay Iceland laakiin waxa uu ku dhaawacmay iskululeynta taasoo keentay inuu shaxda ka bedelo xiddiga Tottenham Moussa Sissoko.
Frank Lampard ayaa diidanaa in Kante looga yeero xulka France madaama uu dhaawacyo qabay xilli ciyaareedkan laakiin tababare Deschamps ayaa aaminsan in dhaawacii ugu danbeeyay inuusan aheyn mid halis ah.
“Waxa uu xanuun ka dareemay muruqa gumaarka” ayuu yiri tababaraha Faransiiska ciyaarta ka dib. “Waxa uu dareemay inuusan si raaxo leh ku ciyaari karin.
“Waxaan go’aan ku gaaray inaan ka saaro kooxda madaama aan ka baqay in dhaawaciisa uu sii xumaado. Waxaan ogaa in Moussa uu diyaar yahay.”
Markii la weydiiyay haddii uu ciyaari doono kulanka ay France habeenka Isniinta la dheelayaan Turkiga, waxa uu ku jawaabay: “Uma maleynayo in dhaawaca N’Golo Kante uu halis yahay laakiin jawaabtaas caawa idiima siin karo.”
France ayaa dhibtootay iyadoo dhaawacyo ay kaga maqnaayeen Kante, Mbappe iyo Pogba, laakiin waxa ay ku badiyeen 1-0 ka dib rigoore uu u saxiixay Olivier Giroud.
RIKOOR: Cristiano Ronaldo Oo Xalay Sameeyay Taariikh Hor Leh Kadib Goolkii Uu Ka Dhaliyay Luxembourg.